Company - FPMA Toulouse
Zaikabe Nationaly STA
Ny Zaikabe nationalin'ny Sampana Sekoly Alahady (RNSA) dia hatao ny Alakamisy 2 Jiona ka hatramin'ny Asabotsy 4 Jiona 2011 any amin'ny Espase Gard Découvertes – Centre d'activités de loisirs – 30340 Mejannes-le-Clap ary hanasana ny Fiangonana manontolo.
Afaka henonao ato ny Fandaharana manokana; ny Tafasiry; ny Voan-tsinapy ary ny Fanompoam-pivavahana amin'ny fotoan-dehibe ary fandaharana momba ny fanolokoloina kristiana.
Rencontre Nationaly Tily
Ny « Rencontre Nationale des Tily » (RNT) dia hatao ny 30 aprily sy 1 may 2011 ao amin'ny Centre d'accueil "Les Térébinthes" - Domaine du Narais – 72250 Parigne L’Eveque. Hisy ireo fanentanana skoto sahaza ny rehetra toy ny lalao ngeza, lalao skoto, afon-dasy,ritsoka Tily, cd hira tily, boky sns...
Atsam-panahy zoma Masina
Ny Antoko Mpihiran’ny FPMA Toulouse “Feon’ny Mazava” dia manasa antsika hanatrika ny Antsam-panahy amin’ny Zoma 22 Aprily amin’ny 8 ora hariva eto amin’ny Vieux Temple.“Fa nalatsany ny Ràny ho fanavotany ahy sy anao – Fa ity no ràko… izay alatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka” (Matio 26: 28).
SintonyPartager Henoy Vaovaom-piangonana
Randrianarivelo sy Soary dia mampandre ny Fiangonana fa nodimandry ny rainy Randrinanasolo Pierre tamin’ny 7 Oktobra 2011.Ny famangiana dia ho lazaina amin’ny manaraka
Mbola mitohy hatrany ny fisoratana anarana amin’ny Katekomena any amin’ny Mpitandrina. Ny fanombohan’ny fampianarana dia amin’ny Alahady 9 Oktobra izao.
VONDRONASA VOLA SY FANANANA
Mba ahafahana manangona ny fananan’ny Fiangonana, dia hiangaviana isika izay manana izany mba hanatona an’Atoa Raveloson Liva izay miandraikitra ny fanaraha-maso ny entana rehetra.
Marobe ireo mpianatra ka manao antso avo ho antsika izay manana traikefa amin’ny fampianarana ny Tenin’Andriamanitra mba hanatona andRtoa Ramamonjisoa Hanimalala.
Fihaonan'ny Sampana eto @Faritany Atsimo Andrefana
Tontosa soaman-tsara ny lasy izay nataon'ny ankizy nandritra ny fialan-tsasatra lasa teo...
Company Vaovaom-piangonana Isan'Alahady FANOMANANA ZAIKABE NASIONALY (1-3 NOVAMBRA 2013) any Masseube - AUCH: fisoratana anarana: misokatra amin'ny volana jiona
loha-hevitra: " fa Izy no ivelomantsika ary iainantsika" Asa 2:17, 28a (Zaikabe)
" Koa ianao anaka, dia aoka hihahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ni Kristy Jesoa. Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky, izay hahay hampianatra ny sasany koa" II Tim 2: 1-2 (Soritr'asam-piangonana, Komity Nasionaly Soritr'asa Laika)
SAMPANA TANORA KRISTIANA:
fihaonam-be nasionaly sy fanavaozana ny birao nasionaly (RNSTK): 5-7 jolay 2013 any ROUEN
loha-hevitra: "Efa mby akaiky ny Tompo" Jak 5:8b
saran-dasy: 80 €
fisoratana anarana any amin'i RAZANADRAKOTO Toavina mialoha ny 26 may 2013
ISAN-KERITAONA SAMPANA FIFOHAZANA: 7-14 Jolay 2013 any amin'ny Lycée GRANVILLE - Dannemarie-sur-Crête BESANCON
saran-dasy herinandro feno: 90 €, isan'andro: 25 €, zaza latsaky ny 4 taona : tsy mandoa, fisoratana anarana: RAMANGASALAMA Lalatiana 05 61 45 65 12 na 07 86 67 90 03 Joomla SEO powered by JoomSEF